Jobho 15 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Erifazi anotaura kechipiri (1-35)
Anopomera Jobho kuti haatyi Mwari (4)
Anoti Jobho anozvikudza (7-9)
‘Mwari haatendi muvatsvene vake’ (15)
‘Munhu anotambura anenge ari munhu akaipa’ (20-24)
15 Erifazi+ muTemani akapindura achiti: 2 “Munhu akachenjera angapindura nemashoko asina zvaanobatsira here,Kana kuti angazadza dumbu rake nemhepo yekumabvazuva here? 3 Kutsiura nemashoko asina basa hakubatsiri,Uye kungotaura chete hakubatsiri. 4 Nekuti unoita kuti kutya Mwari kushaye basa,Uye unoita kuti kufungisisa nezvaMwari kuonekwe sekusingakoshi. 5 Zvaunotaura zvinobva pakukanganisa kwako,*Uye unosarudza mashoko ekunyengera. 6 Muromo wako ndiwo unokupa mhosva, kwete ini;Muromo wako ndiwo unokupomera.+ 7 Ndiwe munhu akatanga kuberekwa here,Kana kuti wakaberekwa zvikomo zvisati zvavapo here? 8 Unomboteerera Mwari achitaura nyaya dzake ega here,Kana kuti ndiwe wega une uchenjeri here? 9 Chii chaunoziva iwe chatisingazivi?+ Chii chaunonzwisisa iwe chatisinganzwisisi? 10 Pakati pedu pane vachena musoro nevakwegura,+Varume vakura kupfuura baba vako. 11 Kunyaradzwa kwaunoitwa naMwari,Kana kuti mashoko eunyoro aunotaurirwa hazvina kukwana here? 12 Mwoyo wako unoitirei kuti uzvikudze,Uye nei wakabudisa maziso nehasha? 13 Nekuti unotsamwira Mwari,Uye unosiya mashoko akadaro achibuda mumuromo mako. 14 Munhu chii kuti ave akachena,Kana kuti munhu akaberekwa nemukadzi chii kuti ave akarurama?+ 15 Iye haatendi muvatsvene vake,Uye kunyange denga harina kuchena pamberi pake.+ 16 Ko kuzoti munhu anosemesa uye ane uori,+Murume anonwa kusarurama sekunwa kwaanoita mvura! 17 Ndichakuudza; nditeerere! Ndichakurondedzera zvandakaona, 18 Zvinhu zvakarondedzerwa nevarume vakachenjera vazvinzwa kumadzibaba avo,+Zvinhu zvavasina kuvanza. 19 Ivo vega ndivo vakapiwa nyika,Uye hapana mutorwa akapfuura nepakati pavo. 20 Munhu akaipa anongotambura mazuva ake ese,Mumakore ese akachengeterwa mudzvinyiriri. 21 Anonzwa zvinhu zvinotyisa munzeve dzake;+Panguva yerunyararo, vapambi vanouya kuzomurwisa. 22 Haatendi kuti achabuda murima;+Anochengeterwa bakatwa. 23 Anomberereka achitsvaga zvekudya,* achiti: “Zviri kupi?” Anonyatsoziva kuti zuva rerima rava pedyo. 24 Kutambudzika nekurwadziwa zvinoramba zvichiita kuti atye;Zvinouya samambo akagadzirira kurwa, zvomukurira. 25 Nekuti anosimudza ruoko rwake kuti arwe naMwari pachakeUye anoedza kurwisa* Wemasimbaose; 26 Anoomesa musoro achimhanya kunorwisana naye,Aine nhoo yake yakakora uye yakasimba; 27 Chiso chake chakakora,Uye hudyu dzake dzabuda nekukora; 28 Anogara mumaguta achaparadzwa,Mudzimba dzisingazogarwi,Dzichava mirwi yematombo. 29 Haazopfumi, uye pfuma yake haizowedzeri,Uye zvinhu zvake hazvizozari panyika. 30 Achatadza kubuda murima;Rimi remoto richaomesa bazi rake,*Uye achabviswa nemhepo yemuromo waMwari.*+ 31 Haafaniri kutsauka achivimba nezvinhu zvisina zvazvinobatsira,Nekuti zvaachawana hazvibatsiri; 32 Zvichaitika zuva rake risati rasvika,Uye mapazi ake haazokuri zvakanaka.+ 33 Achaita semuzambiringa unodonhedza mazambiringa awo asina kuibva,Uye achaita semuorivhi unodonhedza maruva awo. 34 Nekuti ungano yevasingadi Mwari* haina zvibereko,+Uye moto uchaparadza matende evanoita zvechiokomuhomwe. 35 Vanobata pamuviri pedambudziko, vobereka zvinhu zvakaipa,Uye muchibereko chavo munobuda unyengeri.”
^ Kana kuti “Kukanganisa kwako kunodzidzisa muromo wako.”
^ Kana kuti “kukurira.”
^ Kureva, tariro yake yekupona.
^ ChiHeb., “wake.”
^ Kana kuti “yevakatsauka pakutenda.”